From Dictatorship to Democracy, now available in Afaan Oromoo - OPride.com
From Dictatorship to Democracy, now available in Afaan Oromoo
Gene Sharp’s influential book, From Dictatorship to Democracy, is now available in Afaan Oromoo. The book offers practical and theoretical guide to toppling dictatorships through nonviolent means. It is credited for inspiring the recent wave of successful non-violent uprisings including the one in Egypt.
Two Oromo activists have teamed up to complete the translation from English to the Oromo language. Afaan Oromo is the third most widely spoken language in Africa. The book is also available in two other Ethiopian languages – Amharic and Tigrinya. We commend the translators for their timely contribution. We hope that Oromo and Ethiopian activists who are grappling with the most repressive form of tyranny will find the book useful in their quest for freedom and democracy.
Read From Dictatorship to Democracy in :
Abbaa Irrummaa irraa Gama Dimokraasii – in Afaan Oromoo
Baroota dheeraadhaaf kan natti dhaga’amaa ture akkamitti ummatni abbaa irrummaa dhorkuu fi dhabamsiisuu danda’u kan jedhu ture. Yaada koo kana kan gaabbisanii fi cimsan amanatta mootummooti abbaa irree ummata hacuucuu fi dhabamsiisuu hin qaban kan jedhu ture. Amantaa kana daran kan naa cimse kitaabota barbaachisummaa mirga dhala namaa ibsan, haalaa fi amaloota abbaa irree (kan Aristotle abbaa irree itti xiinxale), fi seenaa abbootii irree keessaafuu kan Nazi fi Stalin faa dubbisuu kiyya ture.
Bulchiinsa Nazitii jala namoota jiraatanii fi miidhaman, warra kaampitti guuramani irraa hafan wajjin wal bareera. Biyya Norway tti namoota bulchiinsa Nazi didanii fi irraa hafan qunnameera. Oduu warra didda Nazi irratti dhumanis dhaga’eera. Yihudota du’a Nazi jalaa miliqanii fi jara miliqsuu irratti namoota isaan gargaaran wajjin haasa’eera.
Beekumsa shororkaa bulchiinsi komunisti ummata irraan gahan namoota qunnamuun osoo hin taane kitaabota dubbisuun argadhe. Shororkaan warri komunistii kun maqaa cunqurfamootaa bilisoomsuutin sirna abbaa irrummaa gaggeessu tahee natti mul’ata.
Waggooti dhihoo as ammoo biyyoota akka Panama, Poland, Chile, Tibet fi Burma kanneen abbaa irreen bulan keessa namoota jiraatan qunnamuun caalaatti maalummaa abba irree hubachuu danda’eera. Weerara komunisti Chayna of irraa deebisuuf lola warri Tibet lolan; Rashiyaa keessatti fonqolcha mootummaa bara 1991 yaalame warra fashalsiise fi Thailand keessatti bulchiinsa waraanaa deebisuu yaalii tahe ummatni karaa nagaa qabsoo godhuun hambisuu danda’uu isaanii fi waa’ee hammenya abbaa irrummaa irraa waan baayyee baradheera.
Bulchiinsa hammeenyaan mormuuf qabsoo godhamee fi wareegamni hadhaawaan kaffalame kan nama gaddisiisuu tahus amma illee balaan guddaan jiraatuu osoo beekanii dhiiraa fi dhalaan qabsoo godhuu itti fufan isaanii kan nama jajjabeessuu dha. Kanaaf fakkeenya gaari kan tahu: Panamaa keessatti bulchiinsa Noreegaa kan morman, cunqursaa Soviet mormuun Vilnius fi Lithuania keessatti qabsoo godhame, Chaynaa keessatti waltajjii Tiananmen tti hiriira bahamee haga galgala taankiin waltajjiii seenutti fi Burmaa keessatti naannoo Manerplaw bilisoomsuuf qabsoo godhamanii dha.
Bakkoota qabsoon itti godhamanii mormitooti itti kufan dowwadhe keessaa: bakka awwaalaa fi waajjira TV Vilnius, Riga bakka namooti itti rashanaman, Kaaba Xaliyaani keessa bakka Ferrara jedhamu iddoo mormitooti dhukaasaan ajjeefaman, bakka awaalaa Manerplaw kan namooti hedduun daa’ima dabalatee itti awwaalaman dha. Sirni abbaa irrummaa hundi godaanisa kana fakkaatu of duubatti dhiisanii dabru.
Guutu Dubbisuuf : Abbaa Irrummaa irraa Gama Dimokraasii